मणिपुरका मुख्यमन्त्रीले गरे स्वतन्त्रता सङ्ग्रामी निरञ्जन सिंह छेत्रीको सालिग अनावरण - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारमणिपुरका मुख्यमन्त्रीले गरे स्वतन्त्रता सङ्ग्रामी निरञ्जन सिंह छेत्रीको सालिग अनावरण
March 7, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार 0
मणिपुरका मुख्यमन्त्री एन. बिरेन सिंहले मणिपुरको इम्फाल वेस्ट जिल्लाअन्तर्गत पर्ने काङ्गलातोङ्गबी-मा आज स्वतन्त्रता सङ्ग्रामी निरञ्जन सिंह छेत्रीको सालिग अनावरण गरेका छन्।
सुबेदार निरञ्जन सिंह छेत्री गोर्खा समुदायबाट स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको लागि शहीद हुनेमध्ये पहिलो शहीद हुन्। उनी मणिपुरका जुबराज टिकेन्द्रजीत सिंहको नेतृत्वअन्तर्गत नेटिभ फोर्समा शामेल थिए। जुबराज टिकेन्द्रजित सिंह उनलाई सुबेदारको सम्मान प्रदान गरेका हुन्।
सुबेदार निरञ्जन सिंह छेत्रीलाई ब्रिटिश सरकारले ८ जून १८९१ मा मृत्युदण्ड दिएको थियो। मृत्युदण्ड अवधि उनले भनेका थिए, ‘मेरो जन्मभूमि मेरो मातृभूमि हो। यस भूमिको लागि मर्न साथै मार्न पनि तयार छु। तर म आफ्नो भूमिको समर्पण र पराधीनता स्वीकार गर्न कदापि तयार छुइन।’
‘शहीद छेत्रीको जीवन, राष्ट्र निर्माणमा गोर्खा समुदायको योगदानको उदाहरण र प्रमाण हो अनि उहाँको बलिदानले हाम्रा युवाहरूलाई हाम्रो राष्ट्रको क्षेत्रीय अखण्डता अक्षुण्ण राख्न तथा यसका नागरिकहरूको भलोको दिशामा सदैव अग्रसर भई योगदान गर्न उत्प्रेरित गरिराखेको छ,’ यसै सन्दर्भमा दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले भनेका छन्।
गोर्खा शहीद छेत्रीको सालिग अनावरण समारोहमा मुख्यमन्त्री एन. बिरेन सिंहलगायत भारतीय गोर्खा परिसङ्घ (भागोप), विद्यार्थी सङ्घ तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।